izinkinga transsexuality noma transsexualism, akazange nanini sobala ngokwengeziwe eminyakeni yamuva. Ukuze nabashintshe ubulili umuntu Kulula, umuntu bayazisola, futhi kukhona abamele singayivumeli intsha, abangafuni nje ngamathe ngemva abantu ukushintsha ubulili babo, kodwa futhi bashaywe. Ngesikhathi esifanayo, umphakathi ulwazi mayelana kobakhe ( "trans") zimbalwa futhi ziyantula. Zama, isibonelo, ukubheka ulwazi kwabezindaba wedolobha ku "nabashintshe ubulili eMoscow." Uzobona inqwaba izikhangiso ubulili, futhi ulwazi mayelana nokuthi ubani lezi "trances" okuyinto izinkinga abahlangabezana obakhathalelayo, yini laba bantu bahlala, ayoba mancane amathuba ukuthola. Ake sizame ukuqonda abangekho kobakhe, kungani laba bantu unqume ukushintsha ubulili, wazi ukuthi ukuphila kwabo kuyoba sifushane.
Transsexual - iyona yigama lezokwelapha
Uqinisile. Ngakho odokotela eside shayela indoda ocansini kabani begazi ayifani umuzwa ngokwengqondo bazethembe. Njengoba yaziwa, iyiphi ingane, uma kuziwa ezincelisayo (kuhlanganise indoda) - intombazane ezingaba khona. Phakathi kwengane esiswini, mayelana ngenyanga yesibili, ukukhiqiza ama-hormone ukuthi ukucacisa ubulili umntwana. Kodwa ngezinye izikhathi kwenzeka ngokuzumayo ahluleka kuyo, futhi ukukhanya zingavela umfana ofisa umuntu wesifazane noma intombazane ngubani likhomba yena nalo muntu. Okunjalo isimo odokotela shayela dysphoria ubulili. Transsexual - Esikhatsini lesinyenti hhayi ezingezwakali, futhi ngokujulile indoda engajabule sibhajwe "izihambi" umzimba. Transsexualism manje bawuqonda nasezibhedlela ezikhethekile kakhulu ukusiza abantu ukubhekana kangcono nale nkinga yokuzibona ukuhlonza.
Transsexual - a amashwa
Ngokwesayensi luthole ukuthi abantu abaphethwe azalwa naso ubulili dysphoria kukhona ukuhluka isakhiwo ingqondo. Akufanele kudidaniswe abagqokisa okwabesifazane. Laba bantu futhi uhlushwa dysphoria, kodwa ngempela omnene. Ngakho-ke, ngezikhathi ezithile ngokwanele ukuba ngigqoke isudi wobulili obuhlukile. Nabashintshe ubulili (isithombe lapha) - abantu esele kabani engqondo kungenziwa ezibuyisiwe kuphela balethwa umugqa ucansi yabo yezenhlalo begazi. Ngenxa inqubo yokwelapha yesimanje abasuke bengakakwazi ukusebenzisa uguqule ngokuphelele psyche womuntu, ochwepheshe washintsha umzimba wakhe. Amakhulu izifundo zibonisa ukuthi leli transsexual - umuntu othambekele izinga lokucindezeleka, ukuzibulala. Kujwayeleke ukuphila kwakhe kuphela ubulili-ushintsho msebenzi. Ukusebenza akusho ngaso sonke isikhathi ukuxazulula inkinga: Ingabe kuwufanele kuyabiza, isikhathi "nokuzalwa kabusha" ihlala iminyaka eminingi, futhi uyahamba wobulili abantu ashintsha njalo engazalanga kakhulu sifushanise ngokuphila kwakhe.
Transsexual - kuyinto evamile?
Ochwepheshe ekubhekaneni dysphoria ubulili, wathola ukuthi namuhla ufuna ukushintsha ubulili babo hhayi kuphela "ukuzalwa" nabashintshe ubulili. Bayanda, ubulili ufuna ukushintsha abantu abafuna ukuba amehlo, ukwenza, noma abantu nge kuhlulekile empilweni yakho. Ngakho abantu ubulili ushintsho ukuze ekugcineni zephule ukuphila. Yingakho, ngaphambi kokuthi uqale "nokuzalwa kabusha" inqubo isiguli, odokotela ebekiwe kuye olunzulu ngihlolwa ngesikhathi zofuzo psychiatrists, kanye nezinye izifundiswa eziningi.
Ubani ophila ngale ndlela, futhi yini ubuntu bakhe